October 28, 2020 – Voice of Myanmar
ရွှေတောင်မြို့နယ်က အသက် ၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို သတ်ခဲ့တဲ့တရားခံဖမ်းမိ
အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ သိင်္ဂီထွန်း (VOM ) ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ မကျီးပေါက်ကုန်းအုပ်စု၊ ကျောက်ဖူးကျေးရွာက အသက်၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကိုသတ်ပြီး အလောင်းကို လယ်ကွင်းထဲမှာထားခဲ့တဲ့ တရားခံကို ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရားခံဟာ အသက် ၅၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ပျောက်ဆုံးပြီး ၂ ရက်လောက်ကတည်းက မသင်္ကာတဲ့အတွက် ရွှေတောင်စခန်းမှာ ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “တရားခံကို ပထမထဲက မင်္သကာလို့ စခန်းမှာ ခေါ်ထိန်းသိမ်းထားတာ။ ခု စစ်တာပေါ်တာပေါ့။ ကလေးပျောက်ပြီးထဲက မသင်္ကာတဲ့သူတွေကို ခေါ်ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် ကလေးကို သတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ရဲက စစ်ဆေးတုန်းပဲ။ ဒီနေ့တရားခံကို သရုပ်ပြဖို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ လူတွေက ဒေါသတွေအရမ်းထွက်နေကြတယ်” လို့ ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ဝေက ပြောပါတယ်။ အသက် ၄နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုသတ်ခဲ့တဲ့…
ပြည်သူတွေရဲ့ ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒကြောင့် NLD ဟာ အသာစီးရနေတာသာဖြစ်
မန္တလေး-အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ NLD ကိုယ်စားလောင်းတွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအလိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူတွေကို စိစစ်ရွေးချယ်တာအပြင် ပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုဟာ ထင်တာထက် အဆပေါင်းများစွာများလာကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဗီအိုအမ်နဲ့ ဆက်သွယ်စဉ်မှာ ဖြေကြားထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စနစ်သစ်ကို ပြောင်းဖို့ အရေးကြီးတဲ့ နောက်အဆင့်မို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ထက်သန်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် သူများတွေထက် အသာစီးရနေကြောင်းပြောကြားထားတာအပါအဝင်၊ ဝန်းရံပြည်သူတွေကို အုပ်စုလိုက်လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့ကိစ္စတွေ မေတ္တာရပ်ခံကြောင်းနဲ့ ကိုဗစ်ရဲ့အကန့်သတ်ကို အခြားပါတီများနည်းတူခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေပြောထားပါတယ်။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်နဲ့ ဗီအိုအမ်အယ်ဒီတာချုပ် ဦးနေမျိုးလင်းတို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို ရှုစားနိုင်ပါပြီ။ #voiceofmyanmar #VOM #NLD #ဒေါက်တာမျိုးညွန့် #ပါတီမိတ်ဆက် zawgy ျပည္သူေတြရဲ႕ ထက္သန္တဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ NLD ဟာ အသာစီးရေနတာသာျဖစ္ မႏၲေလး-ေအာက္တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ NLD ကိုယ္စားေလာင္းေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းအလိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္တာအျပင္ ျပည္သူရဲ႕ပါဝင္မႈဟာ ထင္တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာမ်ားလာေၾကာင္း NLD…
Election, Interview, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, သုံးသပ်ချက်, အင်တာဗျူးLeaveacomment
ရန်ကုန်-အောက်တိုဘာ၂၈-၂၀၂၀ ထက်ခေါင်လင်း (VOM) အကျဉ်းထောင်တချို့မှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အတွက် ထောင်ထဲရှိ အချုပ်သားတွေကို အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပင် ဗီဒီယိုကွန်းဖရန့်စနစ်နဲ့ ရုံးထုတ်ရမန်ယူကြောင်း အကျဉ်းဦးစီးဌာနက သိရပါတယ်။ တရားရေးဌာနနဲ့ အကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ ညှိနှိုင်းချက်တွေအရ မဖြစ်မနေ ရုံးထုတ်ရမယ့် အရေးကြီး အမှုတွေကိုပဲ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း PPE ဝတ်စုံနဲ့ ရုံးထုတ်နေပြီး အမှုတော်တော်များများကိုတော့ ထောင်ထဲမှာသာ ရုံးထုတ်ရမန်ယူတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း အကျဉ်းဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ပြောပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်က “တော်တော်များများကိုတော့ အပြင်ရုံး မထုတ်တော့ဘူး။ တရားသူကြီးနဲ့ အချုပ်တို့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ ဗီဒီယို ကွန်းဖရန့်နဲ့ ရမန်ယူတယ်။ အမှုအားလုံးနီးပါးတော့ ဒီအတိုင်းသွားနေတယ်။ အရေးကြီးလို့ တရားသူကြီးက ထုတ်မှ ရမယ်ဆိုတဲ့ အမှုမျိုးကိုပဲ သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်း ထုတ်တယ်။ ဘယ်အမှုရယ်လို့တော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ချမှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်တော့ ရုံးချိန်းတွေမှာ…
အောက်တိုဘာ၂၈-၂၀၂၀ ဂျန်ကိုးလ် (VOM) မကွေးမြို့မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ NLDပါတီ ၀န်းရံသူတွေက ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း အင်အားပြလှည့်လည်နေချိန် ပြဿနာမဖြစ်ဖို့အတွက် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လာရောက်​ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ရေနံချောင်းမြို့ကနေ ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်းလာကြတဲ့NLDဝန်းရံသူတွေနဲ့ မကွေးမြို့ပေါ်မှာလှည့်လည်နေကြတဲ့ USDPပါတီထောက်ခံသူတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပြီး ပြဿနာဖြစ်မှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေချိန် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနဲ့ မကွေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့က အချိန်မှီလာရောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ ကြံ့ခိုင်ရေးက ဒီမှာသူတို့လှည့်လည်ပြီးတော့စည်းရုံးအင်အားပြတယ်၊ ရေနံချောင်းကလည်း NLDဝန်းရံသူတွေကလည်း စက်လှေတွေနဲ့လာပြီးထောက်ခံအားပေးတယ်၊ အဲ့ဒီ၂ဖွဲ့ကြားမှာပြဿနာမဖြစ်အောင်ထိန်းရတာပါ၊ အေးအေးဆေးဆေး ထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းသာပါတယ်၊ ၂ဖက်လုံးက နင်းကန်တက်ကြွနေကြ​ပြီးစိတ်ကလှုပ်ရှား‌နေကြတော့ တစုံတခုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူး၊ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ လာတားလိုက်တယ်၊ တားနိုင်လိုက်တော့ ပြဿနာမဖြစ်ပါဘူး၊ တိုင်းရဲမင်းကြီးလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူပြောလို့သိရတာ” လို့ မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက လာရောက်ဖြေရှင်းချိန် ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံချောင်းကလာတဲ့ စက်လှေအဖွဲ့နဲ့ မြို့ပေါ်မှာလှည့်လည်နေတဲ့ ၀န်းရံနေသူတို့ ကမ်းနားလမ်းမှာ စတင်ဆုံတွေ့ကြတာဖြစ်ပြီး လူအင်အားများပြားလွန်းတဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲကာ ဝန်ကြီးချုပ်က တားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရ…
ရှမ်းပြည်နယ်က ကျေးရွာ ၃ ခုကို ရွေးကောက်ပွဲ‌ကျင်းပဖို့ ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေမယ့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မပါဝင်
အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ နေနန်းနွယ်(VOM) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေငြာချက်ထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၃ ခုက ကျေးရွာအုပ်စု ၂ ခုနဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခု ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ “မနေ့ကကြေညာချက်မှာ မူဆည်၊ လားရှိုးနဲ့ ကွမ်းလုံက ‌ရွာ ၂ ရွာနဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခု ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ မိုင်းကိုင်ကို ပိုပြီးတော့ စဉ်းစားပေးရမှာလေ၊ မိုင်းကိုင်ကိုကျတော့ ဘာမှ မစဉ်းစားပေးဘူးဆိုတော့ ဒီကြေညာချက်ကတော့ ဘာမှ သိပ်ပြီးထူးခြားတယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး” လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး စိုင်းကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်လိုမျိုး လုံခြုံရေးပြဿနာ၊ တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့နေရာကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်မပြုတာကိုတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာကို UECက တိတိကျကျ ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ စိုင်းကျော်ညွန့်က ပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က…
ရသေ့တောင်မှာ ICRC က ကယ်ဆယ်ရေးပေးနေတဲ့ ရေယာဉ်တစ်စီး ပစ်ခတ်ခံရပြီး လူ (၁) ဦးသေဆုံး
အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ ထက်အောင်စိုင်း (VOM) ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက မေယုမြစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအသင်း(ICRC) က ဘုတ်(ရေယာဉ်)တစ်စီးပစ်ခတ်ခံရပြီး ရေယာဉ်မှာပါလာတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ ICRC က ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ ဘုတ်(ရေယာဉ်) ဟာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ရေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ပြိန်းတောကျေးရွာအနီး မေယုမြစ်အတွင်းမှာ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်ခံရကာ ရေယာဉ်မီးလောင်း နစ်မြုပ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရေယာဉ်မှာပါလာတဲ့ လူ (၄) ဦးထဲက တစ်ဦးသေဆုံးပြီး (၃) ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းနဲ့ သေဆုံးသွားသူမှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ကန်ချောင်းကျေးရွာက ကိုမောင်ချေ (၁၈) နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်က တစ်ဦး၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်က တစ်ဦးနဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်က တစ်ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ်က စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ကိုဘက္ကာကိုဆက်သွယ်ရာမှာတော့ “…
ကောလဟလနဲ့ သတင်းမှားတွေကို သတိထားဖို့ အချက်များ
နည်းပညာ, မြန်မာသတင်း, သတင်းLeaveacomment
ဗကသကျောင်းသား ၉ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နဲ့ ၁လ ချမှတ်
အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ ညီသစ်(VOM) မန္တလေးမြို့ စျေးချိုနာရီစင်ရှေ့မှာ ရခိုင်အရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်က ကျောင်းသား ၉ ဦးကို ပုဒ်မ – ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ်မ ၁၉ တို့နဲ့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁နှစ်နဲ့ ၁လစီ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီနေ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုမှာ အမှု၂ မှု၊ ၇၈၇/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ၅၀၅(ခ) နဲ့စွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာ အောင်ခိုင်မင်း ၊ ကိုလှထွန်းအောင် ၊ ကိုသက်မောင်မောင်၊ ကိုညီညီမင်းထက်ဝေ ၊ ကိုရဲရင့်အောင် ၊ ကိုသုတညီညီ ၊ ကိုကျော်သီဟရဲကျော် ၊ ကိုစိုးလှနိုင် နဲ့ ကိုမျိုးချစ်ဇော် တို့ (၉) ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် အမှုနံပါတ် ၈၀၆/၂၀၂၀ အမှုမှာတော့…
နေပြည်တော်ဒေသခံတွေ ရွေးကောက်ပွဲ စိတ်ဝင်စားကြသလား
နေပြည်တော်-အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ ကိုလတ်(VOM) နေပြည်တော်ဒေသခံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်၀င်းစားမှုရှိကြသလား၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဘယ်လောက်သိထားကြသလဲ ? ဘယ်လို အစိုးရမျိုးကို မျှော်လင့်နေကြတာလဲ ? ဆိုတာတွေကို နေပြည်တော် အခြေစိုက် VOM သတင်းထောက် ကိုလတ်က ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #ရွေးကောက်ပွဲပညာပေး #election Zawgy ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံေတြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စိတ္ဝင္စားၾကသလား ေနျပည္ေတာ္-ေအာက္တိုဘာ ၂၈-၂၀၂၀ ကိုလတ္(VOM) ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံေတြရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္၀င္းစားမႈရွိၾကသလား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ဘယ္ေလာက္သိထားၾကသလဲ ? ဘယ္လို အစိုးရမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာလဲ ? ဆိုတာေတြကို ေနျပည္ေတာ္ အေျခစိုက္ VOM သတင္းေထာက္ ကိုလတ္က ႐ိုက္ကူးတင္ျပထားပါတယ္။ #voiceofmyanmar #VOM #ေ႐ြးေကာက္ပြဲပညာေပး #election
Interview, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, လူထုအသံ, သတင်းLeaveacomment
မနီလာ၊ အောက်တိုဘာ-၂၈-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မြောက်ဆာမာပြည်နယ်မှာ တရားမဝင်တိုက်ကြက်လောင်းကစားဝိုင်းကို ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန် ကြက်ခွပ်ခံရလို့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ရောက်စီးနင်းစဉ်မှာ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ခရစ်စတင်းဘိုလတ်ခ်ဟာ ကြက်ခွပ်ခံခဲ့ရပြီး တိုက်ကြက်ရဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ တပ်ဆင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ခွျှန်ထက်တဲ့ ဓါးသွားနဲ့ ထိုးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ကြက်ခြေထောက်က ဓါးသွားဟာ သူရဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်ကို ထိုးမိပြီး အဓိကသွေးလွှတ်ကြောကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုချက်ချင်းဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ပေမယ့် ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ကတည်းက ကြက်တိုက်တာတွေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ကပ်ရောဂါမတိုင်ခင်ကတော့ ဒေသတွင်းပွဲတော်တွေမှာ သုံးရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနဲ့ တရားဝင်အားလပ်ရက်တွေမှာ ကြက်ဝိုင်းတွေကို ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုဖြစ်တယ်လို့ ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီး Arnel Apud ကအေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို စပြီးကြားချိန်မှာ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒါဟာ မိမိရဲ့ ရဲလုပ်သက် ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ တိုက်ကြက်တစ်ကောင် အခွပ်ခံရလို့…